Fikradaha qurxinta saqafka sare ee guryaha | Qurxinta
Fikradaha qurxinta saqafka sare ee saqafyada
Lahaanshaha terrace waa raaxo, laakiin a Terrace ee saqafka sare waxay kicisaa xaasidnimo. Oo waa in barxadahani ay guud ahaan waaweyn yihiin oo ay ku raaxaystaan ​​sirnimo weyn. Nasiib ma u leedahay inaad mid ku raaxaysato? Markaa waxa laga yaabaa inaad xiisaynayso fikradahan lagu qurxinayo saqafyada sare ee aan maanta kula wadaagno.
Barxaduhu waxay noqdeen a gurigeena balaadhinta nasiinaya meel dheeri ah oo aan ku nasano, ku marti qaadno qoyska iyo asxaabta si ay wax u cunaan ama u beeraan beer. Haddii aad sidoo kale ku darto dabool, waxaad ka faa'iidaysan kartaa iyaga laga bilaabo guga ilaa jiilaalka soo socda. Ka faa'iidayso!
1 Qeex aagag kala duwan oo ku xidh gudaha gudaha
2 Ku ciyaar laamiyada
3 Waxay bixisaa hadh
4 Kordhi aragtida
5 Dooro alaabta guryaha ee dayactirkoodu hooseeyo
6 Ku qurxin dhirta
Qeex aagag kala duwan oo ku xidh gudaha gudaha
Faham booska barxaddaada guud ahaan oo rumayso aagag kala duwan oo isku xidhan. Ha dhigin dhammaan alaabta guriga isku meel haddii barxaddu ay weyn tahay, kala beddel meelaha bannaan si aad u hesho barxad aad u nidaamsan oo geeso leh oo aad ka faa'iidaysan karto waqtiyo kala duwan.
Samee laba aag, mid lagu nasto iyo mid la cuno. U qaybi iyaga oo fiiro gaar ah u leh meelaha laga baxo ee guriga. Dhig meel fadhi oo ku xigta albaabbada ku xidha qolka fadhiga iyo barxada si aad u nasato. Jikada agteedana waxaa ku yaal miiska cuntada oo bannaanka ah si ay kuugu raaxaysato in aad gudaha iyo dibadda u soo gasho cuntada.
Ma cabbiradu waxay suurtogal ka dhigaan abuurista a qolka cuntada oo leh jikada dibadda? Haddii aad ka faa'iidaysato terrace xilliga xagaaga, ha ka fikirin! Waxa kaliya ee ay qaadanayso waa dhawr qaybood oo alaabta guriga ah, barbecue ku dhex dhisan iyo meel shaqo oo saxan leh si aad u abuurto gees noloshaada u fududayn doonta xagaaga.
Barxaddu miyay aad u yar tahay oo wax walba boos uma haysatid? Markaa waa inaad mudnaanta siisaa Markii ay calaamadeeyeen furayaasha lagu qurxiyo saro yar yar oo aan dhawaan kula wadaagnay, ma xasuusataa iyaga?
Ku ciyaar laamiyada
Samee jiirada oo samee isbeddelka walxaha Ka faa'iidaysiga kuwan waa istaraatijiyad weyn oo ku yaal barxadaha waaweyn si meesha bannaan looga dhigo mid firfircoon oo soo jiidasho leh. Si kastaba ha ahaatee, waxaan fahamsanahay in kii hore uusan had iyo jeer ahayn mid la taaban karo ama lagu talinayo, sababtoo ah barxadda ma aha mid aad u weyn, sababtoo ah ma lihin miisaaniyad weyn ama sababtoo ah carruurta ama dadka dhibaatooyinka dhaqdhaqaaqa ayaa ku nool guriga aan rabno inaan awoodno inaan awoodno si madaxbanaan ugu raaxayso.
Maalgelinta laami wanaagsan, dhanka kale, had iyo jeer waa doorasho weyn. Dooro mid u adkaysan kara isbeddellada heerkulka iyo cimilada xun ee leh dayactirka ugu yar. Sidoo kale ogow ka dhig mid aan sibiq lahayn si looga fogaado shilalka.
Dabaqyada dhoobada ah Waxay ka mid yihiin agabka ugu wanaagsan ee lagu jeexjeexo barxadaha, laakiin maaha ka keliya. Haddii aad rabto inaad ogaato faa'iidada iyo khasaaraha shay kasta Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad akhrido maqaal aan hadda daabacnay sanad ka hor. Qaado hal ama laba oo ku dar cawska macmalka ah si aad iftiin iyo cusub ugu keento meeshan bannaanka ah.
Waxay bixisaa hadh
Barxadaha dabaqyada sare waxay ku raaxaystaan ​​saacado badan oo qorraxdu si toos ah u socoto si aad u sameyso qorshee abuurista aagagga hadhka. Meel daboolan ayaa ku siin doonta jawi aad u wanaagsan xagaaga si aad u nasato ama aad wax u cunto. Pergola waa mid ka mid ah beddelka ugu fiican ee tan, gaar ahaan kuwa aluminiumka sababtoo ah iska caabintooda, laakiin waxaad sidoo kale ku sharadsan kartaa xalal ka jaban sida shiraacyada iyo shiraacyada.
Haddii aad ku raaxaysato muuqaalada wanaagsan ee barxadaada, ha joojin iyaga! Haddii aadan lahayn guryo kale oo u dhow ama ay tahay inaad daryeesho sirtaada, ka faa'iidayso aragtida adiga oo ku rakibaya biraha galaaska badbaadada. Meesha nasashada dhig meel bannaanka u jeedda si aadan waxba u seegin.
Dooro alaabta guryaha ee dayactirkoodu hooseeyo
Haddii aad qorsheyneyso inaad abuurto laba ama xitaa saddex meelood oo ku yaal barxadda, waxay noqon doontaa lagama maarmaan inaad doorato alaabta guriga oo tayo leh. A alaabta guriga loogu talagalay curiyayaasha taasi waxay yaraynaysaa dayactirkeeda oo kuguma qasbayso inaad soo ururiso jiilaalka. Alaabta birta ah, fiilooyinka synthetic iyo dharka tignoolajiyada ee dibadda loogu isticmaalo khamaar badbaado leh, in kasta oo haddii aad samaynayso meel daboolan, waxaad sidoo kale dooran kartaa alaab guri oo ka samaysan alwaax teak ah, bamboo ama fiilal dabiici ah.
fadhiga fadhiga Waxay yihiin beddel weyn oo lagu qurxiyo booska noocan oo kale ah, maadaama aad ku ciyaari karto modules si aad u siiso isticmaalyo kala duwan. Haddii aad leedahay marti badan waxaad u isticmaali kartaa dhamaantood sida boogaha, laakiin haddii aad rabto inaad nasato waxaad ku qori kartaa kursiyada armaajada longue ama modules qolalka qorraxda.
Miyaadan rabin inaad hesho meel aad ku kaydiso dhammaan barkinnadaada xilliga jiilaalka? Ku sharad kuraasta ama fadhiga fadhiga ee aagga nasashada leh kaydinta. Oo haddii aad go'aansato inaad sharad ku dhejiso alaabta guriga ee aan loo diyaarin walxaha, dooro iyaga oo laalaaban si ay kuugu sahlanaato inaad ku soo ururiso gees ka sii badan oo la ilaaliyo oo terrace ah oo aad ku daboosho. Had iyo jeer waxaa jira fursado loogu talagalay qurxinta terracyadaas ee saqafyada.
Ku qurxin dhirta
Haddii aad rabto inaad hesho qarsoodi, dhig dheryo waaweyn dhirta dhaadheer ku xiga biraha. Ha u samayn hab toosan, u tag abuurista kooxo dhir ah oo kala duwan halkan iyo halkaas si ay u qaabeeyaan booska hab dabiici ah. Tag dhirta cagaarka ah ee dayactirka hooseeya si aad u abuurto geed yar iyo dheriyo yar oo ubaxyo ah oo ku yaal qolka fadhiga ama goobta cuntada si aad midab ugu darto.
Ma jeceshahay fikradahayada ku saabsan qurxinta saqafyada saqafyada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Meelaha » Terraces » Fikradaha qurxinta saqafka sare ee saqafyada
Sida loo sameeyo muraayadaha Jabbaan ee daaqadahaaga
Faa'iidooyinka resin epoxy sida daboolka dabaqa ah